Irikupa Equipment mabheyaringi Manufacturers, Suppliers - China irikupa Equipment mabheyaringi Factory
WWI mabheyaringi akawana zvazvakanakira kugoverwa mabheyaringi kuti hombe conveyors, yokuchengetera zvinhu conveyors, Unit conveyors, siyana escalators uye elevators, uye zvichingodaro irikupa michina. Irikupa midziyo havana kumhanya zvaidiwa, zvisinei pasi nokukurumidza kunoreva yakakwirira chinodiwa pamusoro rinopfungaira okunze uye Raceway. WWI mabheyaringi ichakupa nyanzvi mabheyaringi mhinduro kuburikidza yedu customized simbi mureza uye nokupisa kurapwa rwokugadzira.
Bulk conveyors vari zvinowanzoshandiswa kunze izvo zvinoda nani chisimbiso waivako yokudzivisa kusvibiswa guruva. Kunze kuti kubereka vanofanirawo kukwanisa kutakura mutoro uye nezvainoita mutoro mu nakisa refu upenyu rishande. WWI mabheyaringi kukupa zvakanaka mhinduro kubva mbishi zvokunyama, kupisa kurapwa, Simbiso marongerwo uye girisi.
Escalators uye elevators
Escalators uye elevators dzine zvinodiwa pamusoro akavimbika, kuchengeteka uye ruzha. WWI mabheyaringi ichava yakatsiga zvikuru uye hwakavimbika kana tenderera.
6319RZ1 irikupa midziyo
6319 Kuudza midziyo
6317 Kuudza midziyo
6314 Kuudza midziyo
6313ZZ irikupa midziyo
6312 Kuudza midziyo
6312 6313ZZ irikupa midziyo
6309-1 Kuudza midziyo
6224ZZ irikupa midziyo
6224ZZ-1 Kuudza midziyo
6224 Kuudza midziyo
6224-1 Kuudza midziyo
6213RZ irikupa midziyo
6213black Kuudza midziyo
6212RZ irikupa midziyo
6211 Kuudza midziyo
6207 6311 6209 Kuudza midziyo
6206RZ1 irikupa midziyo